Sidee loo hagaajiyaa liisaska liiska alaabta Amazon ee habka ugu fiican?
Iyadoo la tixgelinayo in Amazon uu yahay aasaas weyn oo ah raadiye weyn oo wax ka qabta alaabooyinka iibka ah, waa inaad taqaanaa sida loo horumariyo boggaaga Amazon wax ku ool ah oo ku filan oo loogu talagalay keywords keywords bartilmaameedkaaga. Iyo hoosta waxaan doonayaa inaan ku tuso sida loo hagaajiyo liiska wax soo saarka Amazon sida qaybaha ugu muhiimsan, sida Magaca Product, Points Points, Sharraxyada Shirkada, iyo sidoo kale Sawirada Product. Ugu dambeyn, si aad u hesho naftaada oo ka mid ah natiijooyinka ugu muhiimsan ee raadinta ee halkaas ka jira. Sidaa daraadeed, aan aragno sida loo wanaajin karo yoolalkaaga Amazon ee loogu talagalay habka ugu muhiimsan ee suurtogalka ah. Sidee loo hagaajiyaa liiska Amazon Products
Ka hor intaan wax kale, aan ka bilowno qaar ka mid ah fahamka aasaasiga ah ee ereyada muhiimka ah iyo isticmaalka xaqa ayadoo la raacayo geeddi-socodka guud ee wax-ku-oolnimada. halkaas. Marka, haddii aad rabto in aad aragto gaadiidka webka weyn ee loo jiiday liiska sheygaaga, ka dibna waxaad yeelan doontaa inaad hagaajiso astaantaada Amazon iyo qaybihiisa ugu muhiimsan - si ugu dambeyntii ugu raaxaysto heerarka sarreeya ee aad ku aragtay kuwa iibiya ugu wanaagsan oo horey u qaadatay hogaanka. Dhinaca kale, qiimeynta baaritaankaaga hadda ayaa si wanaagsan u qabanaya - sida jilaalka dhabta ah ee iibinta dukaankaaga maraakiibta. Dhinaca kale, si kastaba ha ahaatee, waxaad awood u yeelan kartaa in aad suuq-gareeysid suuqyada qaar si aad u wanaagsan oo sharraxaad leh loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo erayada raadinta dheer ee loo isticmaalo adeegsadaha dhabta ah. Waa hagaag, waa nooc ka mid ah isbedelka - haddii aad darajo sarayso, waxaad heli doontaa dhakhso badan oo aad wax badan gadatid. Ama waliba - marka aad hesho dhakhso, waxaad sii iibin doontaa waxyaabo badan, oo aad sare ugu kacdid dhammaantood. Hoos waxaan ku socdaa inaan qarsoodi doono qarsoodiga waxaanna ku tusayaa sida loo hagaajiyo liiska wax soo saarka Amazon ee qeybihiisa waaweyn.
Abuuritaanka Qodobka Waxyaabaha
Eray kasta oo muhiim ah oo laga helo mawduucaaga sheyga ayaa laga raadiyaa. Macnaheedu waa in isticmaalka ereyada muhiimka ah ama erayada raadinta dheer-dheer ku celceliyo - labadaba sheygaaga sheyga, iyo meelo kale oo ka baxsan bogga wax soo saarkaaga - waxaa si adag loogu talinayaa in laga fogaado dhammaan qiimaha. Iyadoo la abuurayo sheyga alaabta, xusuusnow in aad halkaa ku dhejisid ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan amarka amarkooda. Habkaasi, marnaba ha ku dhaafin, taasi, dabcan, haddii aadan doonaynin inaad ka yeelato ereyada muhiimka ah adigana aad sameyso waxyeello ka badan ta wanaagsan.
(2) Ugu horeyntii, hubi inaad ka fogaato qaladaadka ugu badan ee soo socda oo leh dhibcooyinkaaga xajmigaaga iyo liis gareynta alaabooyinka:
) Ha ku darin wax si buuxda sax ah ama xitaa marin habaabinta macluumaadka - tusaale ahaan, kaliya si aad uhesho ciyaar saxan oo sax ah oo ku saabsan magaca caanka ama midka kale ee tartanka.
Iska ilaali inaad abuurto liistada dheer ee rasaasta ama sharaxaadda alaabta dheeraadka ah ee dheeraadka ah oo lagu buuxiyey waxyaabo badan oo aan loo baahnayn / macluumaad la isku duubay.
Waligaa ha isku dayin inaad u marto booqdayaashaada bogg kale (i. e. , ha isku dayin inaad isticmaasho qiimaha saddexaad ee dhinacyada, soo saaraha saxda ah, ama macluumaadka banaan oo furan ee halkaa ku yaal) Source .